हत्या,हिंसा र बलात्कारले उठाएको गम्भीर प्रश्न – eSajha News
हत्या,हिंसा र बलात्कारले उठाएको गम्भीर प्रश्न
प्रकाशित मिति: ५ असार २०७७, शुक्रबार ०८:४७
पछिल्लो केही दिनमा सामुहिक हत्या बढ्दै गएको छ । केही हप्ता अघिमात्र रुकुममा भएको घटनापछि त्यसलगत्तै रुपन्देहीमा पाँच जनाको सामुहिक हत्या भएको थियो । समग्रमा भन्ने हो भने सामुहिक हत्याकाण्ड केही वर्षयता निक्कै बढेको छ । गत वर्ष मात्रै पाँचथरमा सामुहिक हत्याकाण्ड भएको थियो ।
भर्खरै मात्र क्वारेन्टाइनमै रहेकी महिलामाथि भएको सामुहिक बलात्कारको घटना अति नै क्रुर र अमानवीय छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न लागि बनाइएको क्वारेन्टाइनमा समेत यस्ता घिनलाग्दा घटना हुने गरेको पाइएको छ । सुन्दै पत्याउन नसकिने अति नै डरलाग्दा घटनाहरु पटक–पटक हुने गरका सुनिन्छन् । दिनहुँ श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले घटिरहेका हत्या,बलात्कार ,चोरी ,लुटपाट जस्ता घटनाले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भनेर सोच्न जरुरी भइसकेको छ । के मान्छेमा मानवता हराएकै हो त ? हाम्रो समाजमा सामाजिक सुरक्षाको अभाव देखिएको छ । जनताले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारले सुरक्षा दिन सकेको छैन । सरकारले नै कोरोना जस्तो महामारी रोक्नका लागि बनाइएको क्वारेन्टाइनमा रहनेहरुलाई समेत सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । सरकारले अपराधीलाई कडा कारवाही गर्न पनि सकिरहेको छैन । अपराधीको मनोबल दिनानुदिन बढिरहेको छ । देशमा कानुन कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ ।
हुन त विश्वमा नै हत्या, हिंसा र बलात्कार बढ्दै गएको छ । जति समाज विकासको बाटोतर्फ अग्रसर हुँदै गइरहेको छ त्याति नै समाजमा हत्या हिंसा जस्ता घटनाले आक्रामक रुप धारण गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा भने महिला र बालबालिका धेरै हिंसाका शिकार भइरहेका पाइन्छन् । दिनदिनै बढ्दै गएको महिला हिंसा र हत्याका घटनाले देशमा शान्तिको वातावरण नभएको महसुस हुने गरेको छ । हरेक हप्ता ३/४ जना महिला हिंस,हत्या र बलात्कारका घटनाहरू राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ ।
अझ हालको परिवेशमा हेर्ने हो भने महिला हिंसा र हत्याका घट्नाले पराकाष्टा नै नाघेको छ । सोच्न पनि नसकिने गरी कैलालीको लम्कीमा क्वारेन्टिनमा बस्दै आएकी महिलामाथि भएको सामुहिक बलात्कार जस्ता घटनाले असुरक्षित बनाएको छ । मानिसमा मानवता हराउँदै गएको छ । जताततै घटिरहेका यस्ता घटनाले देशमा जनसाधारणले शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । हाम्रो समाजमा सार्वजनिक भएका यस्ता कैयौं घट्नाहरु छन्, जसको विश्लेषणबाट हामीले हाम्रो समाज कतातिर डो¥याइरहेका छौं भन्ने अनुमान गर्न सक्छौं । हामीले हाम्रा अग्रजहरुबाट के सिकेका थियौं र भावी पुस्तालाई के सिकाइरहेका छौं ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
बलात्कार, हत्या गर्नेहरु सजायको बदला उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । अपराधीले न्याय पनि पैसामा खरीद गर्न सफल भइरहेको अवस्था छ एकातिर भने पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । सर्वसाधारण जनताले आफूलाई असुरक्षित महसुुस गर्न थालेका छन् । दिनदहाडै महिलाहरूमाथि बलात्कार तथा हत्या हुँदासमेत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बेखबर वा मौन बसेका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
अपराध गर्नेहरुका विरुद्ध सरकारको कठोर कानुन र व्यवहार नभएका कारण यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा दैनिक महिलाहरूको बलात्कार, हत्या र हिंसाका समाचारहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन् । बालिका बलात्कार, हत्या , महिला हिंसा र विभेदका घट्नामा संलग्न दोषीलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । कानुनी राज्यमा कानुनको अनुभुती गराउन सरकारले सशक्त कदम चाल्नु आवश्यक छ।-जनधारणा साप्ताहिक
५ असार २०७७, शुक्रबार ०८:४७ मा प्रकाशित